Tags: jobs jobs in Yangon
လူကြီးမင်း၏ CV ကို ၇၀% ရအောင်ပြုလုပ်ပြီး Lenovo Yoga Tablet 8 ကို ရယူပါ။
Jobless.com.mm (Jobsinyangon.com) ကို လွန်ခဲ့သော ၈.၈.၁၃ တွင်စတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ CV Databaseတွင် ရှိသော လက်ရှိအလုပ်ရှာဖွေသူများအားလုံးနှင့် August လကုန်အထိ CV ကို တင်သောအလုပ်ရှာဖွေသူအသစ်များအတွက် ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးမည့်အစီအစဉ် ကိုပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ CV သည် အနည်းဆုံး ၇၀%ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူကြီးမင်း၏ နောက်ဆုံး ပညာရေး၊ လျှောက်ထားလိုသောအလုပ်၊ လူကြီးမင်း၏ ဓာတ်ပုံ စသည်တိုိ့ကို ဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ CV ဖြည့်ခြင်းသည် အရမ်းကို လွယ်ကူပြီး မြန်ဆန်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CV Database တွင် 70% ထိရောက်အောင် CV ဖြည့်သူတိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြီးမားသော promotion တွင် Lenovo YogaTablet 8 ကို ကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူကြီးမင်း၏ account သို့သွားပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ CV % quality ကို စစ်ဆေးပါ။
လူကြီးမင်းတို့၏ www.jobless.com.mm အဖွဲ့သားများ
The Yoga Tablet 8's groundbreaking design doesn't just optimise the tablet experience — it also looks great. The device tapers toamere 3mm at the edge,alaser-etched back housing prevents scratches and makes it comfortable to hold, and chrome-painted trim completes the look.
Integrated Bluetooth, 802.11 b/g/n WiFi and keep you connected. And you can stay that way wherever you go, 24/7, with optional 3G HSPA+ connectivity. Unlike most tablets, the Yoga Tablet 8's speakers face front — toward you — rather than to the side our out the bottom. Combine that with Dolby® Digital Plus enhancement and you havearich, immersive sound experience that's perfect for watching videos or listening to music.
The 5.0M rear and 1.6M front cameras let you take high-definition pictures and enjoy crisp, clear video chats. Expand the Yoga Tablet 8's native 16GB of eMMC storage with up to 64GB micro-SD card storage support — perfect for transferring photos or storing large files like movies. - S.C.
Processor: MTK 8125 Quad-core ARM Cortex-A7( 1.20GHz 533MHz 1MB)
Display type: 8.0" 1280x800
Total memory: 1.0GB LPDDR2 800 MHz
Hard drive device: 16GB
Network card: 11.b/g/n Wifi Wireless, 3G connectivity